Psalmii 11 NTLR - Nnwom 11 NA-TWI | Biblica América Latina
Psalmii 11 NTLR - Nnwom 11 NA-TWI
Awurade mu gyidi
1Mewɔ gyidi wɔ Awurade mu sɛ obegye me nkwa. Ɛnyɛ nsɛnhunu sɛ moka kyerɛ me se, “Tu te sɛ anomaa kɔ mmepɔw so, 2 efisɛ, nnebɔneyɛfo no afa wɔn tadua, na wɔde wɔn agyan no akyerɛ atreneefo so sɛ wɔbɛtow awɔ wɔn wɔ sum mu.
3 Sɛ nneɛma mu kyekyɛ saa a, onipa pa rentumi nyɛ ho hwee.”
4 Awurade wɔ n’asɔrefi Kronkron no mu. N’ahengua wɔ soro. Ɔhwɛ nnipa fi baabiara, na onim nea wɔn nyinaa reyɛ.
5 Ɔhwehwɛ nnipa pa ne nnebɔneyɛfo nyinaa mu pɛ, na asoɔdenfo de, ofi ne koma nyinaa mu kyi wɔn.
6 Ɔma gyabiriw a ɛredɛw, ne sufre a ɛrehyew ba nnebɔneyɛfo so, na ɔde mframa a emu wowɔ twe wɔn aso.
7 Awurade yɛ ɔtreneeni, na ɔdɔ nneyɛe pa enti, wɔn a wɔyɛ ade pa no, behu n’anim.
NA-TWI : Nnwom 11